Indlu "Vicolo della Torre" - TRASTEVERE - I-Airbnb
Indlu "Vicolo della Torre" - TRASTEVERE
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Giulia
I-Trastevere, ifulethi elicwengiweyo enkabeni yeRoma.
Ifakwe kahle, ifakwe konke ukunethezeka, izici nokusebenza kahle, nokungena okuzimele kanye nokungena okuzenzakalelayo, uzozizwa ukhululekile ukujabulela isimo sangempela saseRoma. Indawo iyingqayizivele zonke izakhiwo zesikhumbuzo ezidume kakhulu zisendaweni ehamba ngezinyawo, kodwa futhi iseduze nezithuthi zomphakathi, izimakethe, izitolo zokuthenga nezindawo zokucima ukoma, lapha ungazijabulisa ngamamenyu ajwayelekile emathaveni amaningi aseRoma!
I-Loft eTrastevere, enkabeni yeRoma!
Ifakwe kahle, ifakwe konke ukunethezeka, umshini wokuwasha nokomisa, okomoya, i-TV, i-Wifi yamahhala, indlu yokugezela eneshawa enkulu, ikhishi, ifriji, i-oven microwave, iketela likagesi, umshini onamakhasuli e-Nescafè nokudla okulula kwasekuseni. Isici nokusebenza, ngokungena okuzimele kanye nokungena okuzenzakalelayo, uzozizwa ukhululekile ukujabulela isimo sangempela saseRoma, esifundeni esivamile saseRoma yakudala! Indawo ihlukile: eduze nezithuthi zomphakathi, irenki yamatekisi, imakethe, izitolo kanye nezikhumbuzo ezidume kakhulu zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. I-Trastevere iyinhliziyo yangempela yaseRoma, lapha ungazijabulisa ngamamenyu avamile ezindaweni eziningi zokucima ukoma, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela ezidayisa ukudla, ama-ayisikhilimu; ungakwazi ukuphumula ekushoneni kwelanga ukuphuza ingilazi yewayini noma ingilazi kabhiya ezindaweni ezihlukahlukene zokushicilela noma amabha ewayini endaweni, ungathola iholide elingenakulibaleka hhayi nje egameni lesiko nobuhle, kodwa futhi nokuzijabulisa!
Ukuhlanza kokugcina akufakiwe ku-30 €
4.83 out of 5 stars from 171 reviews
4.83 · 171 okushiwo abanye
Isifunda "seTrastevere" yindawo eseRoma lapho abantu baseRoma bazalelwa futhi bathuthukiswa khona. Umthombo wogqozi lwezimbongi uBelli noTrilussa, iTrastevere iyinhliziyo yaseRoma.
Phakathi kwamatshe aluhlaza, izikwele kanye ne-Fontanone, izakhamuzi zendawo, abantu baseTrastevere, babephila ukuphila okujwayelekile ezikhathini zasendulo, bezehlukanisa nezicukuthwane ngenxa yesimilo sabo sokuziqhenya nesoqobo, kanye nobuhle babesifazane babo. Namuhla, isifunda saseTrastevere siphakathi kwezindawo ezinhle kakhulu nezimpawu zaseRoma, isikhungo sempilo yasebusuku nokudla newayini. Lapha ungakwazi ukuphefumula umoya wangempela, indawo ehlala kuyo igcwele amakilabhu nezindawo zokuzijabulisa, enye ethakazelisa kakhulu kunomunye, eye yaguqula ubusuku bube ukuphila kwangempela kweCapitoline kwangempela. Itiyetha evulekile yezikwele ezimangalisayo (i-Piazza Trilussa, i-Piazza Santa Maria e-Trastevere, i-Piazza S. Cosimato…), amasonto nemigwaqo engokomlando, uphawu lwakudala nolwesimanje lwezikhathi zamaRoma.
Ungangithinta nganoma yisiphi isikhathi ku-whatsapp noma ku-airbnb!